त्रियुगामा शासक बनेर होईन सेवक बनेर काम गर्छु–उम्मेद्वार किरण राई – गाउँपालिका
त्रियुगामा शासक बनेर होईन सेवक बनेर काम गर्छु–उम्मेद्वार किरण राई
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २५, २०७४ समय: ६:१३:३०
किरण राई त्रियुगाको लागि कुनै नौलो नाम होईन । युवादेखि बृद्धासम्मको मन, मानसपटमा रहेको नाम हो किरण राई । तिनै राई दुई दशकपछि असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचको लागि त्रियुगा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र उदयपुरको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार छन । जनताको काममा सदैव लागि परिरहने राईको युवामाझ मात्र नभएर तमाम त्रियुगा बासीसँग गाढा सम्बन्ध राख्छन । खेलकुद क्षेत्रमा मात्र चार्चा नभएर सामाजिक क्षेत्रमा समेत गहिरो रुची राख्ने राई अवको त्रियुगा नगरपालिकाको नगर सरकार प्रमुख बन्न चाहान्छन । माओवादी केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सचिब रहेका तथा माओवादी केन्द्रबाट मेयरको लागि चुनावी मैदानमा रहेका राईसँग यस गाँउपालिका दैनिकले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सार जस्ताको तस्तैः–
गाँउपालिकाः– गाँउपालिका दैनिकमा स्वागत छ ?
राई– धन्यवाद ।
गाँउपालिकाः– अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राई–नेकपा माओवादी केन्द्रबाट त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनेको छु । साथीभाई र पार्टीका नेताहरुसँग छलफल र मतदताको घरदैलो गर्दै छु । चुनाव जित्ने तयारीमा छु ।
गाँउपालिकाः– कसरी माओवादी केन्द्रबाट त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बन्नु भयो ?
राई– हामी धेरै आकाँक्षीहरु थियौं । पछि अन्तिममा गएर पार्टीमा धेरै छलफल र वहस भयो । अन्य पार्टीमा जस्तो हाम्रो पार्टीमा टिकटको लागि अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रधा थिएन । चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने लाईनमा हामी थियौं । जनताबढी जस्तो कस्को नाममा केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ, उसैलाई पार्टीले टिकट दिने सोच पार्टीको थियो । पार्टीको लागि त्यो व्यक्ति मनै परेको हुँ ।
गाँउपालिकाः– भनेपछि हजुप्रति मतदाता केन्द्रित भएको पार्टीले मेयरको टिकट दियो ?
राई– हो । सबैजना लागेर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने पार्टीको बुझाई छ । त्यसैले मलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको हो ।
गाँउपालिकाः– तपाँइको चुनाव जित्ने आधार के के छन् त ?
राई–पहिलो मुख्य कारण भनेको पार्टीको संगठननै हो । अहिलेको मतदाताहरुले काम गर्ने व्यक्ति खोज्दछन । समाजमा नयाँ कुरा दिन सक्ने व्यक्ति रोज्दछन । अन्य पार्टीको उम्मेदवारको तुलनामा म जनताको काममा धेरै जोडिनु स्थानीय आधार हो । त्यसमा पनि सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनका लागि माओवादीले नै राज्यको अगुवाई गरेको थियो । अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागि जुन सोच माओवादीले अगाडि सारेका छ त्यो नै चुनाव जित्ने आधार काफि छ । मुलुक अहिले माओवादीको प्रस्तावअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय तहलाई कसरी अगाडि बढाउने, स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने र अझै कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने ’भिजन’ र योजना माओवादीसँगै छ । यसो भएकाले जनताले माओवादीलाई नै मतदान गर्नुपर्छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको पक्षमा, खासगरी कांग्रेस एमाले लगायतका दलभन्दा माओवादीनै अगाडी छ ।
माओवादी केन्द्रकै बल र प्रयत्नले आखिरमा अधिकार गाउँ तहसम्म सिंह दरबारको अधिकार आएको छ । गाउँ तहसम्म मात्र होइन, त्यहाँबाट पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर वडा तहसम्म दिएका छौ । परिवर्तन नचाहनेले जिते र पुरानै एकात्मक संरचना कायम राख्न चाहनेको बाहुल्य रह्यो भने मात्र जनताको हातमा पुगेको त्यो अधिकार फेरि फर्केर सिंहदरबारमा जाँदैन । माओवादीले जित्दा मात्र परिवर्तनको अभियानको सही ढंगले सम्बोधन हुनसक्छ । स्थानी स्तरबाट त्रियुगा नगरपालिकामा पनि भन्नु पर्दा पनि माओवादी केन्द्रले जिते मात्र नयाँ परिवर्तनको आउने छ । गाँउ नगरमा सिंह दरबार पुर्याउने माओवादी केन्द्रको जुन अभियान छ, त्यो मुख्य चुनाव जित्ने आधार हो । जनताले यसैमा साथ दिनेछन ।
गाँउपालिकाः– त्यसो भए माओवादी केन्द्रका के के हनु त मुख्य चुनावी एजेण्डा ?
राई– माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतको समग्र विकासका लागि मुख्य नीतिहरू तयार गरेको छ । राजनीति जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह
स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनसहभागितामूलक समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाइनेछ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीलाई प्राथमिकता दिइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यान र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर व्यवस्थामा जोड दिइनेछ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार गर्दा विदेशी बैंकद्वारा सञ्चालित गरिने छ । भूमि सुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति–सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिने छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, पशुपालनलगायत नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने हो । गाउँहरूलाई स्मार्ट नमुना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । सहर वा नगरको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिनेछ । साथै, औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ । नगरहरू अन्तराट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरूको आयात गर्ने व्यवस्था गरिने छ । पर्यटन व्यापार उद्योगमा रूपान्तरण, नेपालको पहिचान, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने लगायतका छन । मुख्य रुपमा त्रियुगा नगरपालिकामा पनि माओवादीका यिनै चुनावी एजेण्डा हुन । यसैको आधारमा चुनाव जित्ने छौ ।
गाँउपालिकाः– त्रियुगामा मतदाताले तपाँईलाई के अपेक्षा गरेर मतदान गर्ने त ?
राई–मैले धेरै कुरा अघि नै पनि भनिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले सिंह दरबार भएका अधिकारलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा ल्याइदिएको छ । अहिले त्यो नै धेरै काफी छ । फेरि जुन अहिले हाम्रो पार्टी ६८ करोडको हाराहारीमा त्रियुगा नगरपालिकामा जुन ल्याएको छ । त्यो पनि माओवादी केन्द्रलेनै गर्दा त्रियुगा नगरपालिकामा आएको हो । अव सिंहदरबारबाट विभाजन हुने बजेट त्रियुगा नगरपालिकाबाट हुँदै छ । यहाँ हामीले सुविधा सम्मन्न, सबै रोगको उपचार हुने अस्पताल खोल्नुपर्छ । त्यसमा अव बन्ने त्रियुगा सरकारको ध्याँन जानु पर्छ । अन्यपार्टीको भन्दा माओवादी केन्द्रले जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने नि सबैले बुझेका छन ।
त्रियुगा नगरपालिकामा रहेका जनता मुख्य रुपमा खानेपानीको समस्याबाट पीडित छन । मैले चुनावी कार्यक्रमममा टोल टोल जाँदा काकाकुलको अवस्था देखे । त्यो काकाकुल अवस्थालाई तत्काल एकदेखि दुई वर्ष भित्र अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यता त्रियुगामा अति विपन्न वर्गको बसोबास छ । त्यसलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउन पनि रोजगारीको व्यवस्था गुर्नपर्छ । त्रियुगामा भुमीहिन जनतालाई भुमि दिलाउनु पर्ने छ । भुमीहिनलाई लालवपुर्जा दिलाउन्छु । एकीकृत बस्तिको योजना ल्याउनको लागि अवका दिनमा माओवादी केन्द्रको स्थानीय सरकार हुनुपर्छ । त्यसको लागि त्रियुगा नगरबासीले हामीलाई जिताउनु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
गाँउपालिकाः– त्रियुगा नगरपालिकामा तत्काल देखिएका समस्याहरु के के हुन ? कसरी समाधान गर्नुपर्छ ?
राई–त्रियुगामा वर्गिय र जातिय गरी, सबै प्रकारका मान्छेको बसोबास छ । त्यसमा पनि अति गरिब परिवार पनि छन । आर्थिक रुपमा जो जेस्तो भएपनि सरकारी सेवा सुविधा सबैलाई बराबरी बनाउनु मेरो मुख्या काम हो । मतदातादाले मबाट अपेक्षा गर्ने पनि यही हो । विशेष गरेर विपन्न वर्गलाई नयाँ संविधानअनुसार रोजीरोटी व्यवस्था गर्न मलाई भोट दिन सक्छुपर्छ । जो जनता प्राकृतिक विपतिको जोखिम मोलेर बसिरहेका छन, ति जनतालाई सुरक्षीत बसोबास मिलाउने पनि काम छ । पुँजी भएका जनतलाई त्यो लागनी गरी पुँजी बढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गरिबीको रेखामुनी भएका जनतालाई आर्थिक रुपमा सुधारको काम पनि, म बाटै जनताले आशा अपेक्षा गर्दा राम्रो हुन्छ ।
खास गरी कृषिमा तरकारी खेतीको लागि प्रत्साहन गर्ने हो । जुन तरकारी अहिले पनि त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाट बजार सिरहा सप्तरीबाट आएको तरकारी खाईरहेका छौ । गाईघाटमै उत्पादन भएको तरकारी खान पाइएको छैन । कृषि औद्योगिकरणको बिकास गर्दै त्रियुगा नगरलाई सवल र सक्षम बनाउने हो । म बाट त्रियुगाबासीले यही आशा गर्दानै राम्रो हुन्छ । तत्काल तरकारीमा आत्मानिर्भर हुने कार्ययोजना हामी ल्याउँछौ । खानेपानीको समस्या हटाउने छौ । त्रियुगा नगरपालिकाका भित्र बनेका सडकलाई व्यवस्थित बनाउने छौ । गाईघाटका ढल नालाको उचित व्यवस्थापन गर्नेछौ । सडक नपुगेका बस्तिहरुमा सडक पु¥याउने छौ । बनेका सडकलाई ग्राभेल तथा पिच गर्नेछौ । त्रियुगा नगर क्षेत्रका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छौ । बैज्ञानिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर युवलाई रोजगारमुखी बनाउपर्छ । युवालाई उद्यमी बनाउनु हो । एक घर एक रोजगारको व्यवस्था त्रियुगा नगरबासीलाई बनाउन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीनै आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छ । यसैको लागि त्रियुगा नगरपालिकाबासीलाई माओवादी केन्द्रमा मतदात गर्न अनुरोध गर्दछु ।
गाँउपालिकाः– पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा जाँदा त्रियुगा नगरको ग्रामिण क्षेत्रमा के के समस्या देख्नु भयो त ? समाधाका उपाय के हुन्छन जस्तो लाग्यो ?
राई– त्रियुगा नगरको ठुलो भुगोल छ । यहाँ समस्या मात्र छैनन । यहाँ धेरै ठुला अवसर पनि छन । जुन मैले जाल्पा चिलाउने पुग्दा चुन ढुँगा देँखे । जुन सिमेन्ट उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यो त्यहाँ अहिले चलिरहेको एउटा मात्र उद्योग खोल्न मात्र होईन, अझै अर्को उद्योग पनि खोल्न पनि पुग्छ । त्यो सम्भावना मैले देखेको छु । अर्को सिमेन्ट उद्योग खोल्न एक घर एक शेयरको नीति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । यहीका जनता आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छन । जोगिदह, घनचक्रे, साउने, खाँबु, बुर्जाकान्लामा मुख्य रुपमा खानेपानी र औषधीको समस्या छ । त्यो तत्काल हटाउन स्थानीय सकारको ध्याँन पु¥याउन सकिने छ ।
त्यसको लागि एकीकृत सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन नगरपालिकाकाले दिने सेवा वडामा जान्छ र वडाको सेवा बस्ति बस्तिमा पु¥याउन सकिन्छ । भौगोलिक बिकटलाई ध्याँनमा राखेर जनताको घरमा पुगेर सेवा दिने योजना बनाउनु पर्ने देखको छु ।
गाँउपालिकाः– गाईघाट सहरलाई कस्तो बनाउने योजना छ ?
राई– मेरो मुख्य पाँच योजनाहरु छन । जसमा पाँच वर्षमा पहिलो १ मा प्रविधि र सेवाग्रहीमैत्री त्रियुगा नगरपालिका बनाउनु हो । त्यसको लागि ‘स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था गर्ने छु । उक्त कार्डको प्रयोगले विद्युत महसुल, खानेपानी, मालपोत कर आदि सरकरी कर घरैबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु हो । २ मा उद्यमशील गाईघाट शहर हो । याहाँ युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गरी त्रियुगा नगरलाई पर्यटन, रिसाइकल उद्योग र मनोरञ्जन उद्योगको केन्द्र बनाउनु हो । ३ मा वातावरणमैत्री शहर घरबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु हो । प्रत्येक वडामा पार्क निर्माण गरी हरित शहर निर्माण गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गरी ’ग्रिन सिटी’को बिकास गर्ने मेरो प्रतिवद्धता छ । ४ मा स्वच्छ पिउने पानी हो । त्यसको व्यवस्था गर्ने छु । ५ मा दिगो मोडलको विकास हो । जसमा मुख्य सडकमा गुड्ने साइकल, अपाङ्ग, बटुवाका लागि छुट्टै लेन निर्माण गरी सडक बनाउने छु । शहर वरिपरि ’ईलेक्ट्रिक ट्रली’ बस चलाएर सफा इन्धनमा जोड दिइने छु । ग्रिन होम्स’ मोडलमा निर्माण गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने गर्ने छु ।
प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ त्रियुगालाई विज्ञान प्रविधिसँग जोड्दै डिजिटल शहर बनाउने छु । पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायसँगै महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट विकासमा जोड दिने छु । मतदताको शासक नभएर सेवक बन्ने छु । नगरलाई पुर्ण रुपमा बन्द हड्ताल र जुलुस मुक्त गरी शान्ती क्षेत्र घोषण गर्ने छु । स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ अघि बढ्ने छु । खेलकुदका विद्या अनुसार रंगशाला बनाउने सोच पनि राखेको छु । एक नम्वर प्रदेशको नमुना नगरपालिका बनाउने सोचमा छु ।
गाँउपालिकाः– चुनाव प्रचार प्रसार अभियान कसरी चलाउनु भएको छ ?
राई–चुनाव प्रचार प्रसार अभियान प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएका छौ । अन्य पार्टीको तुलनामा गर्ने सक्ने काम जनतालाई भनेका छौ, नगर्ने काम जनतासँग गरेका छैनौ । जे बोल्छौ त्यही गर्छौ । जनताले हिजोका दिनबाटै स्थानीय लिडर, स्थानीय सकार बनाउने मान्छे थाहा पाईरहेका छन । मतदातादालाई धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, मतदाताले कस्लाई भोट दिने भन्ने बारेमा सोचि सकेका छन ।
पार्टीले चुनावको लागि त्रियुगा नगरपालिकामा जन वर्गिय संगठन, जवस मोर्चा, वाईसियल सबै परिचालन गरेको छ । टोल टोलमा इकाई कमिटि समेत निर्माण गरेका छौ । दिन प्रति दिन चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम अक्रमक रुपमा अघि बढाईरहेका छौ ।
गाँउपालिकाः– अन्त्यमा मतदताको लागि के भन्नु हुन्छ ?
राई–न्याय प्रेमी जनताको लागि म के भन्छु भने, लामो समयदेखि गलत राजनीति भएकाले गलत व्यक्ति छनोट गर्दै आएका थियौं । यसपटक न्याय प्रमेमी महान जनताले सहि व्यक्ति छनोट गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । राजनीतिक पार्टी पनि सहि भएको र जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिलाई मत लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । म मेयर भएँ, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुलाई माओवादीको गोलकार भित्रको हँसिया हतौडामा मतदान गरी विजय गराउन हुन अनुरोध गर्दछु । म त्रियुगा नगरबासीको लागि पनि यहि अनुरोध गर्दछु । म शासक होईन सेवक बनेकार काम गर्ने छु ।
बेल्टारमा राहत वितरणमा खटिने जनप्रतिनिधी सहित एक सय जनाको स्वाब संकलन
कोरोना संत्रासले दिएको पिडा भित्रको खुशी !
उज्यालो वडा कार्यक्रमले चर्चा बटुल्दै वडा अध्यक्ष
नेकपा एमाले चौदण्डीगढी नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार नरेन्द्र राउतले विजयी भएमा सरकारी सेवा सुविधा नलिने निर्णय गरे
कटारीका व्यवसायी कार्कीले गरिदिए जिल्लाभरका पत्रकारहरुको कोरोना विमा
घर निर्माण गर्ने क्रममा लडेर १ को मृत्यु